“Ndaida Chaizvo Kuva Mupristi” | Bhaibheri Rinochinja Upenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ndaida Chaizvo Kuva Mupristi”
Yakataurwa naRoberto Pacheco
GORE ROKUBEREKWA: 1957
NHOROONDO YOUPENYU: AKADZIDZIRA UPRISTI; AIVA NEHASHA
Ndakaberekerwa mutaundi duku reTexcoco. Panguva iyoyo, migwagwa yakawanda yakanga isina kugadzirwa, yakazara guruva. Zvaisava zvitsva kuona vanhu vemumaruwa aiva pedyo vachiuya nemadhongi avo muguta akatakura zvinhu zvokutengesa. Mhuri yedu yaiva yevarombo, iine vana vapfumbamwe uye ini ndaiva wechinomwe. Baba vangu vaigadzira maguarache (hwashu) kuti tiwane chouviri. Asi vakafa ndiine makore manomwe. Kubvira ipapo, amai vangu vaitambura kuti vawanire mhuri chokudya.
Sekuru vangu vairidza violin (chiridzwa chakaita segitare) uye vaitungamirira boka raiimba nziyo dzechitendero dzemusambo weclassic. Anenge munhu wese wemumhuri medu airidza chiridzwa. Amai vaiimba mukwaya yechechi, uye sekuru vangu vairidza piyano nekuimba nziyo dzeopera. Taiva takazvipira pakunamata muchechi yeRoma uye ndaiita basa rokubatsira mupristi pamisa, ndichida chaizvo kuzova mumishinari wechechi yeRoma. Asiwo ndaifarira chaizvo mafirimu ekarati. Kuramba ndichiona mafirimu iwayo kwakaita kuti ndive munhu anofarira zvekurwa.
Muguta rePuebla, ndakapinda chikoro chechitendero chaidzidzisa vanoda kuzoita vapristi, vafundisi, zvichingodaro. Chinangwa changu chaiva chokuzoita mupristi wechechi yeRoma. Asi mugore rokupedzisira rezvidzidzo zvangu ndakaodzwa mwoyo nechechi yeRoma. Mumwe munun wechidiki akatanga kuita zvairatidza kuti aida kuti ndiite zvepabonde naye. Ndakakunda muedzo wacho, asi izvi zvakaita kuti ndive nechido chokuroora. Ndakaonawo kuti vapristi vakawanda vaiva neunyengeri. Ndakazosiyana nechinangwa changu chokuva mupristi.
Pandaiita basa rokubatsira mupristi pamisa ndaida chaizvo kuzova mumishinari wechechi yeRoma, asi ndaifarirawo chaizvo mafirimu ekarati uye zvakaita kuti ndive munhu anofarira zvekurwa
Ndakasarudza kudzidza zvemimhanzi paNational Conservatory of Music kuMexico City. Pandakapedza zvidzidzo zvangu, ndakaroorana nemudzimai wangu uye pasina nguva takanga tava nevana vana. Ndairiritira mhuri yangu nokuimba paMisa muChechi yeRoma.
Kubvira pakutanga chaipo, zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka muwanano yedu. Ini nemudzimai wangu tairwisana pamusana pekuti taiitirana shanje. Takatanga tichikandana makobvu nematete asi takazopedzisira tava kukandana zvibhakera chaizvo. Papera makore 13 takasarudza kuparadzana uye pashure takazodambura muchato.
Ndakatanga kuonana neZvapupu zvaJehovha ndisati ndaparadzana nemudzimai wangu. Zvapupu zviviri zvakagogodza pasuo redu ndokutaura kuti zvaida kukurukura Bhaibheri neni. Ndaifunga kuti ndaiziva zvakawanda nezvechitendero saka ndaida kuvaratidza kuti havazivi. Ndakavabvunza mibvunzo yakaoma yandaifunga kuti haina mhinduro. Asi ndakashamisika kuti vaindipa mhinduro dzinogutsa dzinobva muBhaibheri. Ndakatanga kuona kuti ndaingoziva zvishoma. Zvisinei havana kuzoramba vachindishanyira nokuti mudzimai wangu akanga asingavafariri uye ini ndaiva nezvakawanda zvokuita.
Papera makore mashanu ndakanga ndava kugara nemumwe mukadzi, anonzi Elvira, pandakasangana zvakare neZvapupu zvaJehovha. Elvira aifarira Zvapupu saka zvakandiitira nyore kuti ndigare ndichidzidza Bhaibheri. Asi zvakanditorera makore akawanda kuti ndirege mararamiro akaipa andaimboita.
Ndakaona kuti kana ndaida kunamata Jehovha nemwoyo wose, ndaifanira kuchinja zvakawanda muupenyu hwangu. Kutanga, ndaifanira kusiya basa rangu rokuimba paMisa yeChechi yeRoma uye izvi zvaireva kuti ndaifanira kutsvaka zvimwe zvokuzviraramisa nazvo. (Zvakazarurwa 18:4) Ndaifanirawo kunyoresa muchato wangu naElvira.
Chimwe chezvinhu zvaiva zvakandiomera zvikuru chaiva chokudzidza kudzora hasha dzangu. Ndima mbiri dzemuBhaibheri dzakanyatsondibatsira ndiPisarema 11:5, inotaura kuti Jehovha anovenga chisimba, uye 1 Petro 3:7 iyo yakandidzidzisa kuti kana ndichida kuti Jehovha anzwe minyengetero yangu, ndinofanira kubata mudzimai wangu nerukudzo. Pandakafungisisa ndima idzodzo ndokunyengetera kuti Jehovha andibatsire, ndakakwanisa kudzora hasha dzangu zvishoma nezvishoma.
Bhaibheri rakandidzidzisa kuti kana ndichida kuti Jehovha anzwe minyengetero yangu, ndinofanira kubata mudzimai wangu nerukudzo
Ndava nemhuri inofara. Ndiri kuedza chaizvo kuita kuti ndive neukama hwakanaka nevanakomana vangu vandakabereka nomudzimai wangu wokutanga uyewo kubatsira mhuri yangu kuti irambe iine kutenda kwakasimba.
Pandakanga ndichiri mudiki, ndaida chaizvo kuva mupristi uye kubatsira vanhu. Iye zvino ndava kuona kuti upenyu hwangu hwava nekwahwakananga. Ndinodzidzisa zvemimhanzi kuti ndikwanise kuriritira mhuri yangu. Ndinoonga zvikuru kuti Jehovha akandiitira mwoyo murefu ndokundipa mukana wokuchinja kuva munhu ari nani!
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Ndaida Chaizvo Kuva Mupristi”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI Mwari Ane Utsinye Here?